९ वर्षिय सिरियन बालिकाले क्यानडामा गरिन आत्महत्या - LiveMandu
विश्व ध्रुविकृत हुँदैछ अनि हामीहरुले शायद बिभिदतामा एकताको श्रृजना गर्न सकेकै छैनौं । मध्यपूर्वबाट शरणार्थिहरु यूरोप र उत्तर अमेरिकाका देशहरुमा कठिन यात्रा गर्दै जाने चलन बढ्दो छ तर केहि दिनअघि एउटा यस्तो घटना घट्यो जस्ले कलिला बालमष्तिष्कमा पनि बिजारोपण गरिएको रेसिज्मको एउटा ठूलो बिरुवाको पर्दाफाश गर्यो ।
क्यानडाको क्यालगरी स्कुलबाट यि ९ वर्षिय बालिका अर्को स्कूलमा सारिने तरखरमा थिइन । कारण थियो साथीहरुको दुव्यबहार , यिनलाई मुसलमान भएकी अनि सिरियाबाट आएकी कारणले कक्षाका साथीहरुले निकै खिसि गर्ने गरेका थिए । अमल अलस्थिवी नामकी यि बालिकाले मार्चको अन्तिम साता आफ्नै घरमा आत्महत्या गरिन किनभनें अर्को स्कुल जाँदा पनि उनलाई कसैले माया नगर्ने कुरा यिनका साथीहरुले बताएका थिए । तिमी जहाँ गएपनि तिम्रो धर्म र देशका कारणले सबैले तिमीलाई घृणा गर्नेछन भनी साथीहरुले यिनलाई भनेंका अनि बरु तिमी अब मरेकै बेस भनि पनि सुझाव दिएको भोलिपल्टै यिनले आत्महत्या गरिन् । उनले बुवाआमालाई पनि यस विषयमा भनेंकी थिइन, स्कुलमा यिनका मातापिताले गुनासो त राखे तर केहि सुनुवाई भएन । यि सिरियन नानीले विश्वभरिका रगंभेदि आँखाहरुलाई एउटा प्रश्न दिएर गईन, आखिर कहिलेसम्म ?
सन् २०१५ पश्चात क्यानडामा ४० हजार सिरियनहरु बस्न थालेको बताइन्छ, यि बालिकाको परिवार पनि ३ वर्षअघि क्यानडा आएका थिए । प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्नु नपर्ने जनाँउदै स्कुलमा पनि बुलिगंको कुनै आधार र प्रमाण फेला नपारेको रिपोर्ट पेश गरेको छ । तर यि नानीले असह्य वेदनाका बिच गरेकी आत्महत्याको बिश्वभर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कक्षाकोठाबाट शुरु भएको रेसिज्मको विभेदले कस्तो पुस्ता हुर्काउने हो ? भविष्यले बताँउदै जानेछ ।
१३ औं शताब्दीको मस्जिदलाई बारमा परिवर्तन गरियो